I-AudioMob: Faka Izentengiso Zonyaka Omusha Ngezikhangiso Zomsindo | Martech Zone
Izikhangiso zomsindo zinikeza indlela ephumelelayo, ebhekiswe kakhulu, nomkhiqizo wemikhiqizo yokusika umsindo futhi ithuthukise ukuthengisa kwayo onyakeni omusha. Ukukhuphuka kokukhangisa okulalelwayo kuyinto entsha embonini engaphandle komsakazo kodwa sekuvele kudala omkhulu umsindo. Phakathi kwempikiswano, izikhangiso ezilalelwayo emidlalweni yeselula zibaza inkundla yazo; kuphazamisa imboni futhi kukhula ngokushesha, imikhiqizo ibona ukubekwa okuphezulu kokufakwa kwezikhangiso emidlalweni yeselula. Futhi abantu baya ngokuya baphendukela emidlalweni yeselula, befuna izindlela ezintsha zokugcwalisa isithukuthezi.
I-AudioMob uyiphayona lale fomethi entsha: uNdunankulu we-Google for Startups osekelwa yizikhangiso zomsindo kumageyimu weselula. Ifomethi yabo yezikhangiso iphephe sha ngokuphelele futhi iyacwilisa, enethuba lokuthi imikhiqizo ibe nesibindi futhi ibe nobuciko ekufinyeleleni izethameli.
Isimo sokukhangisa simatasa kakhulu kunakuqala ngalesi sikhathi sonyaka, futhi njengoba kuvalwe izitolo eziningi zomzimba ngenxa yokuvalwa kwempi yasemoyeni izokwazi ukuncintisana kakhulu kunakuqala. Ngakho-ke, ama-brand adinga ukuhlakanipha ngokwengeziwe lapho isikhangiso sabo sichitha khona kulo nyaka ukuthola umkhawulo nokufeza imiphumela abayifunayo; izikhangiso zomsindo zinikeza imoto ephelele yokwenza lokhu.
Abathengi Bafuna Okuhlangenwe Nakho Kwezikhangiso Okungcono
U-2020 ube unyaka ongafani neminye, futhi isikhathi esiningi esichithwa ekhaya, izikhangiso zakudala ziye zachitha isikhala sabezindaba. ILockdown iqhube isizotha emhlabeni, ngomsebenzi owenziwa ekhaya, idla ekhaya nokudlala ekhaya manje sekuthathwa njengokujwayelekile okusha.
Ukuthengwa kukaNcibijane kulo nyaka kuzobukeka kwehlukile: ukuphuma kolayini emnyango nokuqhudelana ngokuthengisa kokugcina konke kuzobonakala. Njengoba izitolo eziningi ezingokwenyama zivaliwe emphakathini, ukuthengisa kuyathathwa ku-inthanethi, futhi abathengisi bangahle baxwaye isikhathi esomile. Ngokwesilinganiso sikaKhisimusi chitha u-2020 kulindeleke ukuthi kwehle u-7% uma kuqhathaniswa nonyaka odlule, nge- £ 1.5billion enkulu, imikhankaso yezikhangiso idinga ukubheka ukufaka umdlalo wabo ukugcina umthengi esebenzisa imali ephezulu.
Ezokuzijabulisa ziyisisekelo sempilo yokukhiya phansi, ne-TV, ifilimu, ama-podcast nemidlalo yeselula konke okuya ngandlela thile ukuvala igebe phakathi kokuqedwa komphakathi nokuxhumeka okubonakalayo. Inkinga yemikhiqizo wukuvezwa ngokweqile ngamafomethi wakudala: abathengi bashiywa befisa okuhlukile ngenkathi amehlo abo ebabaza kwesinye isikhangiso esiphindaphindwayo esibukwayo. Lo Nyaka omusha yisikhathi esifanele semikhiqizo yokubeka indlebe phansi, futhi baqale izitayela ezintsha zokuhamba phambili kwezimbangi.
Isisetshenziswa esingasetshenziswanga sabakhangisi, imidlalo yeselula iyodwa ikhiqize u-48% wemali ephelele yemidlalo emhlabeni wonke kulo nyaka, nge enkulu $ 77 billion. Imidlalo yamaselula igxilile ekuzijabuliseni okhiya phansi, hhayi nje kuphela intsha enenkolelo-ze. Inani labantu lokudlala liguqukile eminyakeni edlule, futhi imakethe yabo ebhekiswe kuyo ngokungazelelwe ibanzi kakhulu.
Namuhla, ama-63% wabadlali bamageyimu beselula ngabesifazane abaneminyaka yobudala ephakathi yowesifazane wesifazane, abaneminyaka engama-36 ubudala.
I-MediaKix, Izibalo Zemidlalo Yabesifazane
Amageyimu weselula ahlinzeka ngethuba elikhulu lokufinyeleleka komkhiqizo ngokugxila okucacile kubantu ababhekisiwe. Ipulatifomu ingasebenzisa izithameli ezingathintwanga futhi ixhume imikhiqizo kubathengi ngqo. Ngamagama alula, imidlalo yeselula ingaxhuma umkhiqizo nezithameli zabadlali bamageyimu abangaphezu kwezigidigidi ezi-2.5 emhlabeni jikelele: umkhiqizo omkhulu ongaba khona omkhulu kuwo wonke umkhakha wezokuzijabulisa. Ukusizakala ngokuthengiswa konyaka omusha kwe-New Year, ama-brand kudingeka alalele izimfuno zabathengi bawo, kanye nemakethe: kungaba yinto engacabangi ukubheka imidlalo yama-mobile njengomsakazo omkhulu ongaba khona wemali engenayo.
Umsindo - I-New Frontier
Izikhangiso zomsindo akuseyona i-megaphone yokusakaza enomkhawulo kusuka emashumini eminyaka adlule. Zingaba zikanokusho, zibushelelezi, futhi zenze okuhlangenwe nakho okukhombisa ukuxhumana kwangempela komuntu.
Ngezipikha ezihlakaniphile ezisizwa ngezwi ukulungiswa njalo emakhaya amaningi e-US, izikhangiso zomsindo zedijithali zivame kakhulu. Zibuye zamukelwe kangcono:
Ngabathengi abangama-58% abathola izikhangiso zomsindo wesipikha esihlakaniphile zingaphazamisi kakhulu kunezinye izinhlobo, kanti u-52% uthe nazo zibandakanya kakhulu!
Ukusebenza kahle kwezikhangiso zomsindo kungokwesibili kuya kokunye, nge 53% yabathengi wenze ukuthenga ngokuya ngesikhangiso somsindo.
Emidlalweni yeselula, izikhangiso zomsindo zingathathwa igxathu eliya phambili ukuzizwa zingokoqobo: zingacwiliswa ngokuphelele ohlakeni lokudala, zinikeze ama-brand ukuthatha okusha futhi okunempilo ngokukhangisa kwazo.
Kungenzeka futhi ukwakha umdlalo ezungeze isikhangiso somsindo esihlanganiswe ngokuphelele, enezela kukho konke okwenzelwa umdlali: njengomsakazo owakhelwe ngaphakathi ku-Big Brother osanda kwethulwa: Umdlalo, osebenzise ifomethi yesikhangiso ye-AudioMob ukunikela ngezikhangiso zomsindo ngesikhathi umdlalo.
Ukwakhiwa kwe-DSP ephumelelayo sekubekiwe I-AudioMob ekuqondiseni izikhangiso zomsindo emidlalweni, iba ifomethi ekhula ngokuthandwa kakhulu ngabathuthukisi. Ukuvuvukala okungokwemvelo kokuya ekukhangisweni okungaphakathi komdlalo ngaphakathi, kushayela umsindo wangaphambili nendawo.
Izikhangiso zomsindo zivumela abadlali ukuthi baqhubeke nokudlala ngenkathi bevezwa esikhangisweni; abaphazanyiswa ngokwanele ukuthi bashiye umdlalo kodwa basazibandakanya nomkhiqizo. Kubathengi, kuwukuwina njengoba bengaqhubeka nokudlala umdlalo; ngemikhiqizo, basathola ukuvezwa okukhulu nokuya ngokuya ngokukhomba; futhi onjiniyela bangaqinisekisa isipiliyoni somsebenzisi esingaphazanyiswa futhi esicwilisayo.
Kuyimpumelelo yokuwina kanye nethuba lokugqama esixukwini ngesikhathi lapho imikhiqizo eminingi kangaka ilwela isigaba sendawo.
Lalela Uphawu Brands!
Izikhangiso zomsindo zisendleleni ekhuphukayo, ngezibikezelo zokukhula kwemali engu-84% kusuka ku-2019 kuya ku-2025, kanti i-AudioMob inikela ngesixazululo esihlanzekile nenhle semikhiqizo ezongena emakethe. Njengoba izitolo eziningi zomzimba zivaliwe nemikhankaso yoNyaka Omusha iba nobuciko ngokwengeziwe, inkundla yempi yemikhiqizo igcwele isidingo sokuphakama ngaphezu kwabancintisana nabo.
I-AudioMob unqamula amathuba amabili amakhulu wemikhiqizo yokunqamula umsindo wemboni: imidlalo yeselula iyindawo ekhulayo ngokwemvelo yokubekwa kwezikhangiso enezithameli eziningi lapho izinkomba zomsindo zishayela isipiliyoni sokucwiliswa nesingathinteki kumdlali.
Ukukhangiswa komsindo kungakhuphula amamayela wokuvezwa konyaka omusha ngaphezu kwawo wonke ngo-2020, kanti i-AudioMob iqhuba umkhakha ukuthi ukhiqize izikhangiso zomsindo ezingcono, ezijabulisa kakhulu nezicwilisayo.
Vakashela i-AudioMob ukuthola eminye imininingwane
Tags: izikhangiso zomsindoukukhangisa okulalelwayoumsindo we-dspumsindodspukukhangisa umdlaloimidlaloukukhangisa kwegeyimu yevidiyo
Ungakwenza Kanjani Ukuhlolwa Okuphelele kwe-SEO